စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မပို၊တဦးတည်းယခုအဌားကားလွယ်တကူရဲ့နှစ်သိမ့်ကနေ။ ကားအဌားကလပ်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးငှားရမ်းရန်ကားများအလွယ်တကူဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင်။ကုမ္ပဏီအကြောင်းတွင်အခြေစိုက်ထိုင်းနိုင်ငံအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် peer၂peer ဝေမျှသောလုပ်ငန်းစဉ်များမျှဝေခြင်းကားနှစ်ခုအကြားမှာအခကြေးငွေ။ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်၏ပိုင်ရှင်ကားအငွေရှာရန်နှင့်အသုံးပြုသူများအဖို့ဆည်းပူးကားပေါ်ငှားရမ်း။
ကားအဌားကလပ်ဖန်တီးအသုံးပြုသူဖော်ရွေပလက်ဖောင်းစႏိုင္သည္ peer၂peer ကားဝေမျှ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များနှင့်လူလိုအပ်ချက်အတွက်ငှားရမ်းခြင်းန်ဆောင်မှုများဖြည့်ဆည်းရန်။ ဒါဟာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်နှစ်ခုကိုအဓိကနည်းလမ်းများကိုပိုင်ရှင်စာရင်းမိမိတို့အမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အသုံးပြုသူများကဖန်တီးအကောင့်အသစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကားများ။
ဌားကားခဲ့ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပြီဘယ်တော့မှ! အငှားကားကလပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရိုးရှင်းသောပလက်ဖောင်းအတွက်ငှားရမ်းမည်သည့်ကားကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းများအတွက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများ၏အရေရက်ပေါင်း။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အတူ facebook အကောင့်ကို။ အဝဘ်စာမျက်နှာဖို့သင်တောင်းမည်တည်ထောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်အချက်ထိုကဲ့သို့သောမောင်းနှင်မှုအဖြစ်၊အပြည့်အဝအမည်များ၊အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်။ အလက်ခံ၏နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းငွေပေးချေမှုကနေတဆင့်ဇာ။ ကိုယ္ဖယ္ထုတ္ျရှာဖွေတွေ့ရှိကူျခရက်ဒစ်ကဒ်များ။
ဒီနေရာရရှိကိုရွေးဖို့ရက်ပေါင်းနှင့်သင်၏လက်ရှိလိပ်စာ။ တစ်ယောက်ယောက်တော့ရစာရင်းတစ်ခုအတွင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့သောကာလတွင်ရွေးချယ်ထားသောလိပ်စာ။ တောင်းဆိုချက်ကိုနှစ်သက်ကားနှင့်ကြောင့်ဖွင့်! အ hirer ပါလိမ့်မယ်သို့ဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းရာပိုင်ရှင်အားဖြင့်တစ်ချိန်ကသူတို့သည်အတည်ပြုတာင္း။
အ hirer နှင့်၏ပိုင်ရှင်ကားအမည်တော့သဘောတူအစည်းအဝေးနေရာကိုကားသော့မည်ဖြစ်ဖလှယ်။ ၏လောင်စာသင့်ကားအပြည့်အဝအဖြစ်အ hirer လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်မှပြန်လာသောအခါတူညီသောအခြေအဆိုပါပြီးနောက်သက်တမ်းကုန်၏ရွေးချယ်ထားတဲ့အရေအရက်။
ကားအဌားကလပ်ကျိန်းသေကိုယူလိုအပ်သည့်တိုင်းတာမှုများကိုသေချာစေရန်လုံခြုံရေးအတွက်နှစ်ဖက်စလုံး transacting။ အားလုံး၏ပထမဦးဆုံးသင့်ကားမည်ဖြစ်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်သူတို့ကထိန်းသိမ်းထားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အ hirer။ သူတို့ကအစနှင့်အတူပူးပေါင်း CompareKa အာမခံကုမ္ပဏီသေချာကြောင်းမူဝါဒအပေါ်ဖုံးလွှမ်းကားကုများအတွက်ခိုးယူနှင့်ယာဉ်မတော်တဆမှု။
တစ်ခုရှိပါတယ်ရရှိနိုင်ပါသည် ၂၄/၇ ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ဖို့အမြဲအဆင်သင့်အားလုံးယူမေးမြန်း။ ဘုန္းလည်းအခမဲ့ဆွဲဝန်ဆောင်မှုမှအိမ်၏ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်အနီးစက်။